Leo sy Libra mifanentana: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana - Famantarana Zodiac
Leo sy Libra mifanentana: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana
Leo sy Libra mifanentana dia zavatra tsara tarehy tokoa. Ny toetran'ny Leo mamiratra dia mameno ny lolo lolo sosialy amin'ny toetra libra voalanjalanja. Samy tian'ireo olona roa ireo ho ivon'ny fiheverana. Ny fotoana mety ifandohan'izy ireo fotsiny dia ny fotoana tokony hizaran'izy ireo ny lanja avo lenta!
Ao amin'ny fifankatiavana Leo sy Libra dia misy fahatakarana sy fitiavam-po be dia be manodidina. Samy mizara marimaritra iraisana momba ny toetra ireo toetra roa ireo. Matetika izy ireo dia mahatakatra ny toetran'ny tsirairay satria samy mankafy adventures sy fiaraha-miasa amin'ny hafa izy ireo.
Ny fahatakarana sy fandeferana fanampiny dia tsy maintsy ho azon'ny mpivady Leo sy Libra. Farafaharatsiny rehefa miteraka fialonana ny fiarahamonina. Tena tsy misy antony tokony hialonana ny antoko roa tonta satria samy mpiara-miasa mahatoky izay mitaky fanoloran-tena amin'ny sakaizany izy roa. Saingy, rehefa manomboka manosika somary akaiky ny kiho ny iray na ny roa tonta dia mety hiteraka korontana eo anelanelan'izy roa!
Lisitry ny atiny Leo sy Libra
Fifanarahana Leo sy Libra
Leo sy Libra Love
Leo sy firaisana Libra
Ny fampifanarahan'ny Leo Man sy ny vehivavy Libra
Fifanarahana Leo Woman sy Libra Man
Leo sy Libra Love Match Wrap-Up
Amin'ny lalao fitiavana Leo sy Libra dia betsaka ny mifanentana. Ity pairing ity dia mahatonga mpivady tena mety. Raha ny marina dia toy ny modely ho an'ny firaisana tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra izy ireo. Raha tia mitoetra ho mahay mandanjalanja i Libra dia miafara amin'ny fefy izy ireo rehefa mandray fanapahan-kevitra lehibe. Saingy, tsy maninona, satria i Leo dia mpitarika voajanahary amin'ity karazana toe-javatra ity. Raha lavo i Libra na manana olana amin'ny fandrosoana dia afaka mandray ny toeran'ny mpitarika i Leo.
Ity mpivady ity dia mahay miserasera sy mahazo namana. Rehefa miara-miasa amin'ny fahitana zarain'izy ireo izy ireo dia tsy misy fanamby manaporofo fa tsy maharesy. Samy tia namana mampiala voly sy ireo olon-tiany ny roa tonta. Samy mampientanentana izy ireo ary mankasitraka ny fahafaha-mivezivezy na miaina ny zavatra rehetra atolotry izao tontolo izao. Milamina ny trano ary manaporofo seranan-tsambo azo antoka izay itoeran'izy ireo mandritra ny jaunts fohy alohan'ny dia mandeha indray. Mandritra ny ao an-trano dia mety hamela ny varavarana hisokatra hidiran'izao tontolo izao izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fivorian'ny mpianakavy dia mitranga matetika, ary tian'izy ireo ny mampiala voly matetika ireo vondrona kely na lehibe amin'ny namana. Ny BBQ an'ny fianakaviana, ny lanonana ary ny fankalazana ny tsangambato dia fahita matetika amin'ny Pair Libra sy Leo.
Ny toerana tsara indrindra hankafizan'i Leo sy Libra ny tenany dia ny fiaraha-mikorana izay ahafahan'izy ireo mampiseho ny tsiro iraisan'izy ireo amin'ny lamaody tsara indrindra. Leo sy Libra dia mizara hafanana amin'ny endrika kanto sy ny tsiro mahafinaritra. Raha azon'izy ireo atao ny manao fety amin'ny VIP na celeb vitsivitsy dia eken'izy ireo ny fanasana fety alohan'ny hisokafan'ny valopy hatrany an-dàlana!
Ny fifandraisan'i Leo sy i Libra, i Libra dia mankasitraka an'i Leo sy ny toetra mampiavaka azy. Leo dia mankafy ilay Libra be fitiavana sy mahafinaritra ary mampihetsi-po. Mifanaraka amin'ny sehatra ara-tsosialy izy ireo satria mankafy resaka. Hiresaka mandritra ny ora maro izy ireo amin'ny farany izay manome azy ireo fotoana hifankafantarana. Arakaraka ny ianarany ny momba ireo mpiara-miasa aminy no vao may ny fitiavana. Misy fandanjalanjana tonga lafatra eo amin'ny fisakaizana mahery vaika sy ny fiainam-pananahana mahatsiravina amin'ny resaka fitiavana Leo sy Libra.
Ao amin'ny pa Leo sy Libra, ity duo ity dia miara-miasa akaiky hanatanterahana ny tanjony sy ny nofinofisin'izy ireo. Leo mampiseho an'i Libra izay mety hataon'ny ambition raha ny fanehoana ny faniriany. Libra dia mampianatra an'i Libra ny maha-zava-dehibe ny fandanjalanjana sy ny antonony amin'ny zavatra rehetra mandritra ny dia na ny fandresena.
Ny fifandraisana dia misy olona roa izay manana ny fomba fijeriny ny ho avy. Samy maivana sy be fanantenana ny olona roa tonta. Feno fahitana sy fanantenana lehibe amin'ny ho avy, Leo sy Libra mahita ny fahafaha-mamirapiratra rehetra eo alohan'izy ireo. Leo nandroso tamin'ny fihetsika 'misambotra ny andro'. Mandroso i Libra ary mampahatsiahy an'i Leo hiadana ary hanitra raozy vitsivitsy eny an-dalana.
Tsy misy antony hanazavana ny fihetsiky ny olona iray amin'ny pairing Leo sy Libra. Misy fatorana ara-tsaina tsy manam-paharoa Leo sy Libra forge. Ny Leo nitondra ny masoandro dia mamela azy ireo hahita tsara amin'ny alàlan'ny fahazarana, fitondran-tena, fihetsika ary fahatsapana an'i Libra. Libra, ny maha-olona be fientanam-po dia zava-boahary voajanahary, noho izany dia manana 'fahatsapana' na 'fahatsapana' tsara izy ireo amin'ny zavatra eritreretin'i Leo na ny dikany ambadiky ny fihetsik'i Leo. Afaka miteny tsy misy teny sy mifankahalala amin'ny ambaratonga lalina izy ireo.
Ny fifankatiavan'i Leo sy Libra dia miteraka fiainana manao firaisana mafana sy mafana eo anelanelan'ny Leo sy ny mpiara-miasa Libra mirindra. Leo sy Libra dia zavaboary tsara tarehy. Ny Masoandro no planeta nanjakan'i Leo, nahatonga an'i Leo ho mpangalatra, mafana fo ary mafana. Venus no mibaiko ny Libra, mahatonga azy ireo ho feno erotika, ara-nofo ary manintona. Ny valiny dia fifangaroana mahafinaritra mamorona raikipohy hihaonana amin'ny firaisana ara-nofo tonga lafatra!
Mampieritreritra i Libra ary Leo fatra-paniry laza. Leo, noho izany, afaka manampy an'i Libra hitondra ny nofinofy rehetra ho tonga saina eo anelanelan'ireo ravina! Tsara kokoa raha manana efitrano tsy misy feony ity duo ity, ambainy mainty na, farafaharatsiny, fomba fijery tsy misy varavarankely! Ny mpifanolo-bodirindrina dia mitady fitsaboana tena izy raha mipetraka akaiky eo akaiky izy ireo rehefa mivory mandritra ny fotoam-pitiavana ireo mpitia ara-tsosialy. (na roa) !
Libra dia manome antoka fa misy fandanjalanjana ao amin'ny efitrano fandriana. Ahoana Rehefa mahazo fanentanana ara-nofo i Libra, dia azo antoka fa hanome fanentanana mitovy ho an'i Leo izy ireo. Rehefa mahazo fikasihan-tanana erika sy oroka malefaka i Libra dia averin'izy ireo ho an'ny namany izany valiny izany.
Libra, ilay mahay mandanjalanja, dia hiantoka ny fahafaham-piraisana ara-nofo amin'ny andaniny roa. Tsy hisy ny fara tampony ary ajanona mihantona miaraka amin'ity pairing ity! Tsisy fika! Ny fihaonana rehetra dia mifarana amin'ny euphoria erotika aorian'ny alina feno fitiavana feno hafaliana!
Leos dia tia fihetsika falifaly, hehy ary mahafinaritra. Ny firaisana eo amin'ny Leo sy ny Libra dia tsy maintsy fitiavana, mahafinaritra ary mampiala voly. Malemy fanahy amin'izy ireo izy ireo ary milalao koa, satria mitazona ny rivotra eo anelanelany ho maivana sy be fitiavana. Leos dia zavaboary masiaka ary ny Libras dia mitaky ny tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra, koa ny fotoam-pitiavana dia mila manatsara izany raha te hahita fahafaham-po amin'ny firaisana ara-nofo izy mirahalahy. Tsy misy ny fitsangantsanganana na ny fanaovana an-tsokosoko ny foreplay, ary ny fitiavana sy ny fihorakorahana eo anelanelan'ny fotoam-pitiavana dia ampahany amin'ny lalàna amin'ity fifandraisana ity!
Fifandraisana Leo sy Libra
Leo sy mifanentana ny Leo sy ny Libra satria mitovy ny fomba fijerin'izy ireo ny fiainana. Izy ireo dia mamihina ny herin'ny mpiara-miasa tsirairay amin'ity pairing ity izay manamafy ny fifamatorana eo amin'izy ireo. Raha ny fahalemena rehetra, ity duo ity dia miara-miasa mba handresy azy ireo na ny mpiara-miasa iray dia hanonitra izay mety ho tsy fananan'ny mpiara-miasa iray hafa.
Ny Leo mpiara-miasa amin'ity pairing ity dia feno angovo. Ny Masoandro amin'ny maha planeta mpanapaka azy dia manome antoka fa manana loharanon-kery tsy manam-petra i Leo, ka dia mandeha foana izy ireo. Fantatr'i Libra izany fihetsika izany satria izy ireo dia lolo lolo ara-tsosialin'ny zodiac, izay mivezivezy eny amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa fihaonan'ny olona vaovao. Venus no tany nanjakan'i Libra, noho izany ny fifangaroan'ny fitiavana dia miteraka làlan'ny fitiavana 'manjavozavo sy mafana' ho an'ity mpivady hery velona ity.
Ny fomba fijerin'izy ireo mamiratra dia mahatonga ny pairing Leo sy Libra ho tiana, na amin'ny maha olona na amin'ny mpivady. Samy miditra amin'ny fifandraisana ara-tsosialy lehibe izy ireo. Tsy misy olana ny fampifangaroana ireo faribolana roa hananganana vondrona mpinamana sy vondron'olona iray. Samy tia mampiala voly namana sy ao ivelan'ny trano i Leo sy i Libra.
Miara-mifampiresaka tsara izy ireo satria mahafinaritra azy ny maneho ny heviny. Amin'ity resaka fitiavana ity dia tsy maintsy re ny antoko tsirairay. Raha mahatsapa ny mpiara-miasa iray fa tsy miraharaha azy ireo dia hitodika any amin'ny faribolan'ny namany izy ireo mba hameno ny banga. Ny fiaraha-miasa ivelan'ny fifandraisana dia ekena tanteraka amin'ity pairing ity.
rahoviana no ho avy ny komet halley
Fifandonana Leo sy Libra
Raha misy tsy fifanarahana mihitsy amin'ity pairing ity dia mafy loha kokoa ny toetran'i Leo noho ny an'i Libra. Na izany aza, na dia eo aza ny fiolahana mafy loha dia tsy olana lehibe izany. Libra dia mpandrindra voajanahary amin'ny fifandraisana rehetra. Manana fomba mahafinaritra izy ireo handresena lahatra an'i Leo hamela ny toerany mafy loha. Libra dia mahay amin'ny fifampiraharahana. Mamerina ny fifandraisan'ny fifandraisana amin'ny laoniny haingana izy ireo. Mahomby i Libra rehefa mampianatra fika amin'ny fifandraisana diplomatika an'i Leo koa. Mampihena ny fahasahiranana amin'ny ho avy izany rehefa misy ny olana.
Miaraka amin'ny herin'ny Masoandro, Leo indraindray 'eo an-dohany rehetra'. Ny olana misy amin'ny ego dia mipoitra raha tsy mandanjalanja izy ireo. Rehefa manjaka ny ego an'ny Leo dia mety mila mihemotra i Libra. Tsy misy fandresena rehefa manjaka ny fizotran'ny ditra nataon'i Leo miaraka amin'ny ego lasa wild. Raha vantany vao nidina avy teo amin'ny rahona i Leo, dia afaka namaky ireo fitaovana fifampiraharahana i Libra.
Ireo antoko ao amin'ny fifandraisana Leo sy Libra dia tia gab. Manokana fotoana hihainoana koa izy ireo. Saingy, raha toa ka mihazakazaka ny antoko iray, dia mety hadinony ny mampifanaraka ny zavatra lazain'ny olon-tiany. Zava-dehibe indrindra ny fahatsapan'ny antoko tsirairay fa toa henoina izy ireo. Ny Leo mahatsapa fa tsy miraharaha azy dia handratra ny fitiavan-tenan'izy ireo. Ny Libra iray izay mahatsapa ho voahilikiliky ny olon-tiany dia maratra amin'ny fo mampihetsi-po.
Leo sy Libra Polarity
Ny famantarana ny zodiaka rehetra dia mifanaraka amin'ny iray amin'ireo polarity roa — ny zodiaka dia mifanitsy amin'ny herin'ny herinaratra vehivavy sy ny masculine na Yin sy Yang. Yin dia mandefitra, mora tohina ary misokatra. Yang dia mivantana, masiaka ary mifantoka amin'ny hetsika.
Leo sy Libra dia famantarana mifanitsy amin'ny hery Yang. Mety misy ny ahiahy misy ny tsy fifandanjana eo amin'izy ireo noho ny tsy fisian'ny angovo Yin. Raha mifanaiky ny herin'ny tsirairay izy ireo ary manome fandeferana amin'ny fahalemena, misy ireo famantarana roa izay afaka mitrandraka ny fitiavana amin'ny fifandraisana voalanjalanja.
Raha manery ny polarize ny yang, dia mipoitra ny olana. Ny be loatra izay mahatonga an'i Leo sy Libra manjaka, mahery setra ary mahery setra. Mihena ny fifanarahan'i Leo sy Libra raha toa ka mifanohitra hatrany izy roa tonta. Raha mijanona tsy maninona ny mpivady, dia hanadino ny tsy fifanarahana rehetra izy ireo ary hiady ho an'ny fitarihana eo amin'ny fifandraisana. Hitsangana ny fialonana ary hitaredretra. Rehefa mijanona ho olana ny fialonana, ny antoko iray na maromaro dia mety hanery ny fahaleovan-tena, ny fizakan-tena ary ny fiaraha-monina. Ny roa tonta dia tsy maintsy mamihina angovo Yin bebe kokoa mba hamerenana amin'ny laoniny ny fandanjana amin'ny toe-javatra tsy mitondra fahavoazana.
Lafin'i Leo sy Libra
Ny elanelana misy eo amin'ny famantarana roa amin'ny kodiarana selestialy dia misy akony eo amin'ny fampifanarahana. Ny halavirana dia fandrefesana diplaoma antsoina hoe lafiny. Ao amin'ny fifandraisana Leo sy Libra, famantarana roa no misaraka. Miteraka endrika sextile izany.
Rehefa misy famantarana roa misy singa sextile ireo mpiorina singa mifampizara dia mifanaraka ihany koa. Mahatonga ny fifandraisana mora hivoarana sy hitazomana izany. Mifanaraka tsara ny roa tonta ary mifampiresaka miharihary. Leo sy Libra koa dia mizara fomba fijery mitovy amin'izany amin'ny fiainana, ka manana sehatra tsara ho an'ny finamanana sy ny fitiavana hatramin'ny voalohany.
Ny lafiny sextile dia manome toky fa Leo sy Libra dia olona mizara soatoavina, etika ary fitondran-tena iraisana. Izy ireo dia famantarana zodiaka miompana amin'ny fianakaviana izay mifankatia sy ny fotoana ahafahana mitaiza fianakaviana. Leo sy Libra dia mahatonga ny ray aman-dreny mahay koa, mitondra fifandanjana eo amin'ny fitaiza eo amin'ny fomba manan-kery sy mangoraka amin'ny fitaizan-janaka.
Ao amin'ny fifandraisana Leo sy Libra, ny duo dia manao namana haingana sy maharitra. Rehefa mihalehibe izy ireo dia lasa mpinamana be indrindra mandritra ny fiainana. Ny fisakaizan'izy ireo akaiky dia bona sy bane. Raha mitazona ny fisakaizana izy ireo ary mampifangaro izany amin'ny tantaram-pitiavana maro dia milamina ny fifandraisana. Saingy, tian'izy ireo ny tsy hidona amin'ny maody namana fotsiny. Raha tsy izany, Leo sy Libra dia lasa toy ny mpiray efitra aminy kokoa noho ny olon-tiana ara-nofo.
Leo sy singa Era Libra
Ao amin'ny tantaram-pitiavana Leo sy Libra, Leo miraikitra amin'ny afo. Ny rivotra no singa mitaona ny fitondrana Libra. Ny rivotra dia solika voajanahary ho an'ny afo. Manafana rivotra koa ny afo. Leo dia afaka manafana an'i Libra amin'ny alàlan'ny fihetsika feno fangorahana sy malefaka. Libra dia afaka manome aingam-panahy an'i Leo be faniriana amin'ny nofinofy sy nofinofy.
Rehefa manambatra toetra roa eo ambanin'ny fitaomana afo sy rivotra dia misy fotoana be fientanam-po miandry ity mpivady ity. Libra sy Leo dia tapa-kevitra ny hanao ny fitiavana farany. Fire Leo dia manao fanahy iniana sy be laza. Ny teny filamatr'i Leo dia tsy hoe 'hanao' tsy misy dikany aho! Manana loharanon-kery tsy manam-petra izy ireo ary mandeha foana.
Amin'izy roa ireo, ny Libra dia mety ho ny homebody lehibe kokoa. Mazava ho azy, tsy manakana loatra an'i Libra izany. Fa maninona Satria i Libra dia mpanetsiketsika sy mpampihorohoro ihany koa. Ny singa an'habakabaka dia manana Libra mandroso. Mihazakazaka amin'ny fahasoavana izy ireo amin'ny fotoana manaraka mba hifaneraserana na hiaina an'izao tontolo izao.
Ny singa amin'ny afo sy ny rivotra dia mampivondrona olona roa manam-pahalalana avo. Ny fitovian'i Leo sy Libra dia nitombo tokoa satria ity mpivady ity dia mandrehitra ny sain'izy ireo mandrakizay. Tian'izy ireo ny mifampianatra amin'ny hafa, amin'ny hafa ary amin'ny fiainana ny tena fiainana. Samy mahaleo tena sy mahaleo tena. Ny zavatra iainany irery, dia entin'izy ireo ao anatin'ny fifandraisana mba hifampizarana.
Ny fiarahan'ny Leo sy ny Libra dia iray amin'ny fifandonan'ny fo sy ny saina! Ao amin'ny efitrano fandriana dia hain'izy ireo ny manome fahafaham-po. Ny fitaoman'ny afo sy ny rivotra dia miantoka ny afon'ny firehetam-po hirehitra mamirapiratra raha ny hafanan'ny fitiavana kosa mijanona ho mafana sy mahafinaritra.
Ny Leo Man sy ny Vehivavy Libra dia manana fifandraisana mafana fo sy mahery ary be fitiavana. Ny Leo Man dia manana filokana amin'ny rendrarendra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Mankasitraka zavatra tsara izy ireo ary manana tsiro lafo. Fa maninona no tsy izy ireo? Izy ireo no mpanjakan'ny famantarana zodiaka rahateo!
Vehivavy Libra, eo ambanin'ny herin'ny planeta Venus, dia mankasitraka ihany koa izay tsara rehetra. Tsy isalasalana fa tia miara-miantsena ity duo ity rehefa mitady asa kanto sy fanaka tsara tarehy ho an'ny tranony! Raha tsy mitandrina izy ireo dia mety hiafara amin'ny fandaniam-bola be loatra. Leo dia manana fahatsapana ho mendrika satria mpanjaka mendrika ny zavatra tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra. Ny vehivavy Libra dia mitaky ny tsara indrindra satria tsy faly izy raha tsy hoe tsara tarehy ny tontolony. Ny fandikana ny tetibola dia mora loatra amin'ny fihetseham-po toy izany.
Amin'ny lalao fitiavana Leo sy Libra dia mety ho mpitondra sy mpanapa-kevitra i Leo. Ny Libra dia voasarika amin'ny fahafinaretan'ny olona rehefa manapa-kevitra. Ny Libra Woman dia mihodina eo anelanelan'ny fihetsem-po sy ny antony manandrana mandray fanapahan-kevitra tsara indrindra. Mahatonga azy ho toy ny mangataka andro io. Tsy miezaka ny hialana amin'ny fanapahan-kevitra izy fa ny firindrana sy ny fandriam-pahalemana fotsiny no tadiaviny hanjaka mandrakariva.
Mivantana i Leo, ka ny Leo Man dia mihevitra sy miteny momba izany. Fantany ny zavatra tadiaviny, hentitra amin'ny finoany izy ary tsy miala amin'izany rehefa misy fotoana azony atao milaza ny ao an-tsainy. Libra dia manana finoana sy soatoavina matanjaka. Saingy, hampangina ny heviny ilay Vehivavy Libra raha mahatsapa izy fa hanakorontana ny fandriam-pahalemana.
Ny antony mahatonga ny fifandraisana Leo sy Libra dia noho ny toetra iraisan'ny mpivady be fitiavana. Ny Leo Man dia miantehitra amin'ny tena, manamafy sy vonona. Izy dia erotika, avo lenta, manintona ary tsara fanahy. Ny vehivavy Libra dia manana tena, manohana ary be fitiavana. Altruistic sy malala-tanana izy. Rehefa mizara fifantohana ny Libra Man sy ny Libra Woman dia afaka mandresy ny vela-pandrika rehetra sendra azy ireo izy rehefa manatratra ny tanjony.
inona no dikan'ny hoe manonofy olona manambady
Raha lasa maditra ny Vehivavy Libra ary tsy mety misafidy safidy lehibe dia afaka manosotra an'i Leo amin'ny fomba diso izy. Ny Libra Woman dia mahatsapa fa manana fotoana rehetra eto amin'izao tontolo izao hisafidianana. Ilay Leo Man dia te-hiala amin'izany fotsiny. Betsaka loatra ny fandresena eto an-tany ka mahantona amin'ny safidy tokana.
Ny Leo Woman dia afaka mahita amin'ny alàlan'ny Leo Man sy ny fihetsiny. Afaka mangina tanteraka izy ary mangina rehefa mandre ny eritreriny. Tsy mila miteny na kely aza izy. Ny Libra Man dia mamorona fahatsapana hafahafa mitovy amin'izany. Afaka 'mahatsapa' izy rehefa misy zavatra tsy mandeha na tsy mety amin'ny olon-tiany Libra. Ny fifamatorana ara-tsaina na ara-tsaina ataon'ity mpivady ity dia avy amin'ny fahalianany lalina amin'ny tsirairay ary ny fiahiany ny fahasambaran'ny vady aman-janany.
Ny Libra Man dia mampivelatra ny fitokisany haingana an'i Leo Woman. Mampiseho ny fitiavany amin'ny teny feno fitiavana sy fikitika mafana izy. Fantany fa tsy mivadika izy rehefa mifankatia. Raha izany dia tsy manana olana amin'ny firaisana ara-nofo izy.
Ny vehivavy Leo dia mitovy amin'ny resaka fifampatokisana. Azo inoana fa mangarahara be izy ka mianatra matoky haingana. Ity mpivady ity dia tsy manana olana amin'ny fizarana ny tsiambaratelo amin'izy samy izy. Io dia manamafy ny fifamatoran'izy ireo. Anisan'ny miafina toy izany ny nofinofy erotic! Satria ity Duo ity tsy manana olana miresaka momba ny firaisana ara-nofo, ny fisokafan'izy ireo dia manampy ambaratonga zava-manitra amin'izay mandeha eo anelanelan'ny lambam-pandriana! Ilay Leo Woman dia tia fanandramana raha ny Libra Man kosa faly mandray azy!
Ny Leo Woman dia mpitarika voajanahary amin'ny fifandraisana. Tsy mampaninona ilay lehilahy Libra raha ny mpiara-miasa aminy no mitarika indraindray. Izy io dia mamela azy hiala, hiala sasatra ary hilentika amin'ny rivotra milamin'ny fitiavan'izy ireo. Matoky azy hanao ny tsara izy rehefa mitaky ny fotoana, fantany fa etika sy hendry izy. Ampidiriny amin'ny zavatra rehetra ihany izy ary azony antoka fa mifanaraka amin'ny zavatra ilainy foana.
Mandritra izany fotoana izany, ny Lehilahy Libra dia mametraka ny Leo Woman ho lohalaharana alohan'ny zavatra hafa rehetra. Ataony lohalaharana amin'ny fiainany izy. Satria mifantoka be amin'ny vadiny ny Libra, mandehandeha eran'izao tontolo izao izy mahatsapa tena mpanjakavavy.
Raha lasa manonofinofy amin'ny fanapahan-kevitra iray ilay Lehilahy Libra, dia nanazava ny zava-misy ny Leo Woman. Izy dia mitarika azy amin'ny maha-zava-dehibe ny mivantana ary manampy azy hahafantatra ny tena fahatsapany momba ny olana iray. Samy manana ny zavatra ampianarina ny roa tonta. Ny herin'izy ireo no andry tohanan'ny fanohanan'ny fitiavana azy ireo amin'ity fifandraisana ity.
Ny Leo Woman sy ny Libra Man dia manana fifandraisana mahafinaritra. Anisan'ny antony mahatonga an'i Leo sy Libra mifanentana be dia be ny fifanajana omen'izy mivady. Manaiky ny hevitry ny tsirairay izy ireo. Ny Leo Woman sy ny Libra Man dia manaja ny tsy fitovian'ny tsirairay. Fantatr'izy ireo fa ny hetraketraky ny olon-tiany sy ny endriny no mahatonga azy ireo tsy manam-paharoa sy ho tia hatramin'ny voalohany.
Te hahafantatra ve ianao raha mahafinaritra be toy ny fifandraisana Leo sy Libra ny fifankatiavanao? Inona no itovizanao amin'ny olon-tianao? Fantatrao ve ny antony mahatonga ny vadinao hifidy? Daily Horoscope Astros dia manana ny fampahalalana mifanentana ilainao! Voasarona avokoa ny takelaka ka tsy ilaina ny mamela vato tsy voahodina! Zahao ny antsipirian'ny fampifanarahana maimaimpoana izao!
Tsindrio raha hianaranao rehetra Ny toetra Leo, ny toetrany ary ny toetrany !
Aries lehilahy sagittarius vehivavy eo am-pandriana
inona no mitranga amin'ny fanandroana ankehitriny
lalao fitiavana ny vehivavy virjina sy lehilahy homamiadana